Mutemo Wekutonga | Law & More | Eindhoven & Amsterdam
Mutemo wekutonga ndewe nezve kodzero uye zvisungo zvevagari nemabhizinesi kuenda kuhurumende. Asi mutemo wekutonga unoteedzawo maitiro anoita hurumende sarudzo uye zvaunokwanisa kuita kana ukatadza kubvumirana nesarudzo yakadai. Zvisarudzo zvehurumende ndizvo zviri pakati pemutemo wekutonga. Iyi sarudzo inogona kuva nemhedzisiro inosvika kwauri. Ndosaka zvichikosha kuti utore danho kana ukasabvumirana nesarudzo yehurumende ine mhedzisiro yako ...
Mutemo wekutonga ndewe nezve kodzero uye zvisungo zvevagari nemabhizinesi kuenda kuhurumende. Asi mutemo wekutonga unoteedzawo maitiro anoita hurumende sarudzo uye zvaungaite kana usingaenderane nesarudzo dzakadaro. Zvisarudzo zvehurumende ndizvo zviri pakati pemutemo wekutonga. Iyi sarudzo inogona kuva nemhedzisiro inosvika kwauri. Ndokusaka zvichikosha kuti utore matanho nekukurumidza kana ukasabvumirana nesarudzo yehurumende ine mhedzisiro yakati kwauri. Semuenzaniso: mvumo yako ichabviswa kana chiito chekumanikidza chikatorwa pamberi pako. Aya ndiwo mamiriro ezvinhu aunogona kupikisa. Chokwadi pane mukana wekuti zvaunopokana ucharambwa. Iwe zvakare une kodzero yekuisa mutemo wekukwirira & zvinopesana nekurambwa kwako Izvi zvinogona kuitwa nekutumira chiziviso chekukwirira. Magweta ekutonga e Law & More inogona kukurayira uye kukutsigira mukuita uku.
Zviitiko mumutemo wekutonga kazhinji kazhinji basa regweta, kunyangwe rubatsiro rwemugweta pamutemo harisi rwekumanikidza. Iwe haubvumirani nesarudzo yehurumende ine mhedzisiro inosvika kure kwauri? Wobva wabvunza magweta ekutonga e Law & More zvakananga. Tinogona kukubatsira iwe!